မျိုးတေဇာမောင် ● အစ္စရေးလ်ကဗျာဆရာ ယဟူဒါ အာမီခိုင်းလ် ဘဝနဲ့ ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဘာသာပြန်သူ အမ်မလီ ● ဂျင်နီဂျိုးဆက်ဖ်ရဲ့ သတိပေးခြင်း
ဘာတေးလစ်တနာ – ၁၉၆၂ မှ ၁၉၇၈၊ ညီအကိုများ မဟုတ်တော့ပါ
ဘဂျမ်းတင်မြန်မာပြန်သည် - လေချွန်သံ
လောကပါလ ● ဒေါ်နယ့်စိတ်ဓာတ် - အပိုင်း (၅)
ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း(သချာင်္) – ဒီမိုကရေစီ မကျဆုံးအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်း
မူရင်းကဗျာ In the Trap / Najwan Darwish (1978 - --) မြန်မာပြန် TS
မောင်ဖေသက်နီ ဘာသာပြန်သည် -ဘာသာစကားတွေ အမြန်တတ်မြောက်စေရေးအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်များ
မျိုးတေဇာမောင် ● အစ္စရေးလ်ကဗျာဆရာ ယဟူဒါ အာမီခိုင်းလ် ဘဝနဲ့ ကဗျာ
ဘာတေးလစ်တနာ – ၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၁။ ပေါက်ဖေါ်လား အားပေးအားမြှောက်လုပ်နေတဲ့ ဖောက်သည်လား
(မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၇
အစ္စရေးလ် ကဗျာဆရာကြီး ယဟူဒါ အာမီခိုင်းလ် ဟာ အစ္စရေးလ် မှာ သာမက နိုင်​ငံတကာ မှာပါ လေးစား အသိအမှတ်ပြုရတဲ့ မော်ဒန်ကဗျာဆရာကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ကဗျာကိုနေ့စဉ်သုံး ဟီးဗရူး ဘာသာစကား နဲ့ အစောဆုံးရေးသားခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ကဗျာတွေကို ဘာသာစကားပေါင်း (၄၀) ကျော်ဘာသာပြန်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ယဟူဒါ အာမီခိုင်းလ် ကို ၁၉၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၃)ရက်နေ့ မှာ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဝုဇ်ဘာ့ဂ်မြို့လေး က အော်သိုဒေါ့ဇ်ဂျူး မိသားစုတစ်စုမှာ ဖွားမြင်ခဲ့တာကြောင့် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဟီးဗရူးလိုရော၊ ဂျာမန်လိုပါပြောတတ်ပါတယ်။ အာမီခိုင်းလ်အသက်ဆယ့်တစ်နှစ်အရွယ် ၊ ၁၉၃၅ မှာတော့ မိသားစုနဲ့အတူပါလက်စတိုင်း ကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချပါတယ်။
၁၉၃၆ မှာ ဂျေရုစလင်မ် မြို့က Ma’aleh ဂျူးဘာသာရေးအထက်တန်းကျောင်းမှာ ပညာသင်ယူ ခဲ့ပါတယ်။ လူငယ်ဘဝ မှာ အာမီခိုင်းလ်ဟာ ပါလက်စတိုင်းမှာရှိတဲ့ ဂျူးကျေးရွာတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးရတဲ့ ဟဂ္ဂနာအဖွဲ့ရဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖြစ်တဲ့ ပါးလ်မတ်ခ်ျတပ်ဖွဲ့မှာ ဗော်လန်တီယာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ ဗြိတိသျှစစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီး အစ္စရေးလ် လွတ်​လပ်​​ရေး တိုက်ပွဲကာလမှာတော့ တောင်ပိုင်းစစ်မျက်နှာ Negev မှာ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အာမီခိုင်းလ်ဟာ ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဗြိတိသျှစစ်တပ် က ထွက်ပြီးနောက် ဂျေရုစလင်မ် က David Yellin ဆရာအတတ်သင် ကောလိပ်မှာတက် ရောက်ပြီး ဟိုင်ဖာမှာ ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံ တည်ထောင်ပြီး နောက်မှာတော့ The Hebrew University of Jerusalem မှာ သမ္မာကျမ်းနဲ့ ဟီးဗရူးဘာသာ၊ စာပေကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ ဟီးဗရူး တက္ကသိုလ်က သူ့ရဲ့ ပါမောက္ခတစ်ယောက်ရဲ့အားပေးမှုကြောင့် သူ့ရဲ့ပထမဆုံး ကဗျာစာအုပ် ဖြစ်တဲ့ Now and in Other Days ကို ၁၉၅၅မှာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၆ ဆိုင်းနိုင်းစစ်ပွဲ၊ ၁၉၇၃ ယွန်ကစ်ပူး စစ်ပွဲတွေမှာလည်း အာမီခိုင်းလ် စစ်မှုထမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ၁၉၆၃ မှာ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ Not of This Time , Not of This Place ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အာမီခိုင်းလ် တစ်ယောက် ကဗျာတွေနဲ့ စပြီးတွေ့ဆုံခဲ့ရတာကတော့ ဗြိတိသျှစစ်တပ်မှာအမှုထမ်းစဉ်ကပါ။ အီဂျစ်မှာ အခြေစိုက်တဲ့ ဗြိတိသျှစစ်တပ်မှာ အမှုထမ်းနေ တုန်း မော်ဒန်ဗြိတစ်သျှ် ကဗျာပေါင်းချုပ် တစ်အုပ် အမှတ်မထင်တွေ့ရပြီး ဒီလန်သောမတ်စ်၊ တီအက်စ် အဲလိယက် ၊ အော်ဒင် တို့ရဲ့ကဗျာတွေဖတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီ့စာအုပ်ဟာ ကဗျာဆရာဖြစ်စေဖို့သူ့ကို ပထမဆုံးလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ စာအုပ်လို့ဆိုပါ တယ်။ အာမီခိုင်းလ် ဟာ ကဗျာတွေ ရေးတဲ့အခါ နေ့စဉ်ဘဝအဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဒဿနဆန်တဲ့အတွေးတွေ၊ ဘဝအဓိပ္ပါယ် ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အလွမ်း၊ သေခြင်းတရား စတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပင်ကိုဟန်၊ သိမ်မွေ့တဲ့သရော်သံ အံဩဖွယ် စိတ်ကူး ကွန့်မြူးမှုတွေ နဲ့ ရေးဖွဲ့ပါတယ်။ ဟီးဗရူးနေ့စဉ်သုံးဘာသာစကားကို သုံးစွဲပြီးရေးဖွဲ့ပါတယ်။ ဟီးဘရူး ဘာသာ စကားဟာ ဟီးဘရူးကျမ်းစာတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတာကြောင့် တချို့ကဗျာတွေမှာ ဟီးဘရူး ဘာသာရေး ကျမ်းစာပါ အကြာင်းအရာတွေနဲ့ ကဗျာကပြောလိုတဲ့ Theme ကို ကျွမ်းကျင်စွာပေါင်းစပ်ပြနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ အာမီခိုင်းလ် ရဲ့ကဗျာတွေမှာ”အသံ” ဟာလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ အာမီခိုင်းလ်ရဲ့ကဗျာတွေကို အစ္စရေးလ် မှာရော အခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ ​တေးသီချင်းအဖြစ် ပြန်တင်ဆက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အာမီခိုင်းလ်ရဲ့ကဗျာတွေဟာ နိုင်ငံတကာ ကဗျာဘာသာပြန်ပရိသတ် တွေကြားမှာ လူကြိုက်များပေမယ့် မူရင်းဟီးဘရူး ဘာသာစကားမူနဲ့ ရေးထားတဲ့ကဗျာတွေကို မြတ်နိုးတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ ဘာသာပြန်တွေမှာ အာမီခိုင်းလ်ရဲ့ ဆန်းသစ်ထားတဲ့ ဘာသာစကားအလှတွေ ပျောက်ကုန်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ အာမီခိုင်းလ်ရဲ့ ကဗျာတချို့မှာ ဂျူးဘာသာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေဟာ လူသားရဲ့နေ့စဉ်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ရောယှက် ပါဝင်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး The American Poetry Foundation နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ အာမီခိုင်းလ် က ဟော့ဒီလိုဖြေထားပါတယ်။ “ကျနော်ဟာ ဘာသာရေးအလွန်ကိုင်းရှိုင်းတဲ့မိသားစုမှာ ကြီးပြင်းခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် ဘုရားရှိခိုး ဆုတောင်းစာတွေ၊ ကျမ်းစာသုံး ဘာသာစကားတွေဟာ ကျနော့်ရဲ့ ပင်ကိုသဘာဝ ဘာသာစကားလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ကဗျာကို ပိုပြီးဝေဝေ ဆာဆာဖြစ်ဖို့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ၊ မျိုးနွယ်စုဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းတွေကို အခြားကဗျာဆရာတွေ အားထုတ်သလို ကြိုးစားပမ်း စား အားထုတ်စရာမလိုဘဲ ကျနော့်ဆီ သဘာဝအလျောက်ရောက်လာတာပါပဲ။” အဲ့ဒီလိုကဗျာတွေကတော့….
အာရပ် ဆိတ်ကျောင်းသားရယ်၊ ဂျူးဖခင်ရယ်
ကြောက်မက်ဖွယ် ဟာ့ဒ်ဂဒ်ယာ စက်ဝန်းထဲက
အဖြစ်မျိုးထဲ ကလေးတွေကို မကျရောက်စေချင်တာပဲ။
ခဏကြာတော့၊ သူတို့ကို ချုံပုတ်တွေထဲ ကျနော်တို့ပြန်ရှာတွေ့ရတယ်
ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ အသံတွေကျနော်တို့ဆီပြန်ရောက်လာခဲ့ကြ
အတွင်းမှာ ငိုခဲ့၊ ရယ်ခဲ့။
Yehuda Amichai ရဲ့An Aran Shepherd Seeks A Kid On Mount Zeon
Had Gadya ဆိုတာ ဟီးဗရူးရိုးရာတေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ တေးသံမြူးမြူးနဲ့သီဆိုကြပါတယ်။ ဟာ့ဒ်ဂဒ်ယာဆိုတာ ဆိတ်ပေါက်လေး သို့မဟုတ် ကလေးလေး လို့အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။
သီချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့အဖေဖြစ်သူက ဆိတ်ပေါက်လေးတစ်ကောင် ကိုရှေးခေတ်သုံး ဂျူးဒင်္ဂါး (Zuzim) နှစ်ပြားပေးပြီး ဝယ်လာခဲ့တယ်။ ကြောင်တစ်ကောင်ရောက်လာပြီး ဆိတ်ကိုစားပစ်တယ်။ ခွေးတစ်ကောင်ထပ်ရောက်လာပြီးဆိတ်ကိုစားတဲ့ ကြောင်ကို ကိုက်တယ်။
အဲ့ဒီ့မှာတုတ်တစ်ချောင်းရောက်လာပြီး ခွေးကိုရိုက်တယ်။ တုတ်ကိုမီးရှို့တော့ရေရောက်လာပြီးမီးငြိမ်းတယ်။အဲ့ဒီ့ရေကိုနွားကသောက်ပစ်တယ်။ နွားကိုသားသတ်သမားက သတ်တယ်။သားသတ်သမားကို သေမင်းကအသက်နှုတ်တယ်။သေမင်းကိုဘုရားသခင်ကြွလာပြီးပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။
ဖွင့်ဆိုချက်တွေမှာတော့ ဟာ့ဒ်ဂဒ်ယာ ဟာ ဂျူးနယ်မြေတွေကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်အသီးသီးကို ညွှန်းဆိုတယ် လို့သိရတယ်။ဆိတ်ပေါက်လေး သို့မဟုတ် ကလေးငယ် ဟာဂျူးတွေကို ဆိုလိုပါသ တဲ့။ ကြောင်ကတော့ အာဆီးရီးယန်းတွေ ၊ ခွေးက ဘေဘီလုံ၊ တုတ်ချောင်းက ပါးရှား၊ မီးက မက်ဆီဒိုးနီးယား၊ ရေက ရောမအင်ပါယာ၊ သားသတ်သမား က အာရပ်၊ သေမင်းက တူရကီ စသဖြင့်ညွှန်းဆိုပါသတဲ့။ ကတိထားတော်မူတဲ့အတိုင်းတော့ နောက်ဆုံးဘုရားသခင်က ဂျူးတွေဘက်က ရပ်တည်ပေးတဲ့အနေနဲ့ သေမင်းကိုဆုံးမခဲ့တယ်။ သီချင်းက ဆယ့်တစ်ပိုဒ်ပါပြီး အပိုဒ်တိုင်းမှာ ဒင်္ဂါးနှစ်ပြား two Zuzim ကိုထည့်ထားတာဟာ ကိုယ်မြေပေါ်မှာနေထိုင်ရတာကိုဂျူးတစ်ယောက်အတွက် အခွန် ဒင်္ဂါး ၂ ပြားပေးရတာကိုဆိုလိုတာပါ။
အခု ကျနော် ခင်ဗျားကို အားလုံးပြမယ်
Yehuda Amichai ရဲ့ The Giving of the Torah
၁၉၃၆ လောက်မှာ ဂျေရုစလင်မ် မြို့ က Ma’aleh ဂျူးဘာသာရေးအထက်တန်းကျောင်းမှာတက်ရောက် ပညာသင်ယူခဲ့ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီး မှာတော့ The Hebrew University of Jerusalem မှာ သမ္မာကျမ်းနဲ့ ဟီးဘရူးစာပေ ကိုအာမီခိုင်းလ် လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ဟီးဘရူးစာပေ မှာTorahဟာ အဓိကကျတယ်လို့သိရပါတယ်။
မိုးဇက် ကိုဆိုင်းနိုင်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာ ဘုရားသခင်က ပေးအပ်တဲ့ ပညတ်တော်တွေဖြစ်ပြီး ပညာရှင် တွေ က ဂျူးတွေရဲ့သမ္မာကျမ်းလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အခုဖတ်ရမယ့်ကဗျာရဲ့ခေါင်းစဉ်က The Giving of the Torahဖြစ်ပြီး အာမီခိုင်းလ် ရဲ့ဘာသာရေးစာပေလေ့လာစဉ်ကာလအမှတ်ရချက်လို့ပြောနိုင်မလား စဉ်းစားစရာပါ။
၁၉၉၄ ခုနှစ် အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆု ကိုအစ္စရေးလ် ဝန်ကြီးချုပ် ယစ်ဇက်ရာဘင် ချီးမြင့်ခံရတဲ့အခါ နိုဗယ်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား မှာ ကဗျာရွတ်ပေးဖို့ ယဟူဒါ အာမီခိုင်းလ် ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ အခုဖတ်ရမယ့် God Has Pity on Kindergarten Children ဟာ အဲ့ဒီ အခမ်းအနား မှာရွတ်ခဲ့တဲ့ကဗျာတွေထဲက တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စရေးလ် နိုင်ငံ တဲလ်အဗိ မြို့တော်မှာရှိတဲ့ရာဘင်ပြတိုက်မှာ ဒီကဗျာကို ကျောက်သား ကမ္ဗည်းထိုးထားပါတယ်။
အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့၊ ဘုရားသခင် က
သွေးတစ်စက်စက်ကျရင်း ၊ ကြက်ခြေနီစခန်းဆီ
ဒါမှ သူတို့ရဲ့ ချမ်းမြေ့မှူက
Yehuda Amichai ရဲ့God Has Pity on Kindergarten Children
အာမီခိုင်းလ် အများဆုံးကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ ဂျေရုစလင်မ်ပါပဲ။ ဂျေရုစလင်မ် နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကဗျာပေါင်းများစွာရေးခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းအရာ၊ တင်ပြပုံ၊ စကားလုံးရွေးချယ်မှု မထပ်တာကို အံ့ဩစရာကောင်းလောက် အောင် တွေ့ရပါတယ်။ ဂျေရုစလင်မ် ကဗျာ အနည်းငယ်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ငိုသံတံတိုင်း ရဲ့အက်ကြောင်းထဲ ထည့်ကပ်ထားတဲ့
ကြေမွ တွန့်လိပ်နေတဲ့ မှတ်စုစာရွက်တွေ။
အခြားတနေရာရာမှာ ၊ သံမဏိတံခါးအိုကြီးမှာ ကပ်ထားတဲ့ မှတ်စုတစ်ရွက်
စံပယ်ပန်းခြုံထဲ ဖွက်ထားတဲ့ တစ်ဝက်__
Yehuda Amichai ရဲ့ Jerusalem 1985
ညမှာ မြို့တော် ပတ်လည်တောင်ကုန်းတွေပေါ်ကကျာက်တုံးတွေ
Yehuda Amichai ရဲ့ The Mayor
ငါ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ယောကျာင်္းတစ်ယောက် သူ့နှဖူးကချွေးကိုသုတ်တဲ့ တဘက်တစ်ထည်။
Yehuda Amichai ရဲ့ Jerusalem
တခါတလေ လူတွေအစား ဖယောင်းတိုင်တွေရောက်လာတယ်
တခါတလေ ဖယောင်းတိုင်တွေအစား လူတွေရောက်လာတယ်
Yehuda Amichai ရဲ့ Jerusalem Ecology
နောက်တစ်ခုက စစ်ပွဲ။ အာမီခိုင်းလ်ရဲ့ စစ်ပွဲအပေါ်အမြင်ဟာ လူသားဆန်လွန်းတာကို Rain on the Battlefield ဆိုတဲ့ကဗျာ တိုလေးမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Yehuda Amichai ရဲ့ Rain on the Battlefield
အာမီခိုင်းလ်ကဗျာတွေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်အဖြစ် ပထမဆုံးပုံနှိပ်ခဲ့တာကတော့ ၁၉၆၅မှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ Modern Poetry in translation ( edited by Daniel Weissbort and Ted Hughes )ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၆ မှာ အီတလီနိုင်ငံ ကရှေးဟောင်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ Spoleto မှာကျင်းပတဲ့ ကဗျာပွဲတော်ကို အက်ဇရာပေါင်း၊ အော်ဒင်၊ နရူဒါတို့နဲ့အတူ အာမီခိုင်းလ်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၈မှာ လန်ဒန်ကဗျာပွဲတော်ကို တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ Assia Guttman ဘာသာပြန်တဲ့ အာမီခိုင်းလ်ကဗျာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်လုံးချင်း Selected Poems ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား တက္ကသိုလ်​ (ဘာကလေ)မှာဧည့်ပါမောက္ခ တာဝန် ထမ်းနေစဉ် ၁၉၇၁ မှာ တော့ ဒုတိယမြောက် ဝတ္ထုစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ Mi Yitneni Malon ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ နယူးရောခ်တက္ကသိုလ်မှာလည်း အာမီခိုင်းလ်ဟာ Poet in Residence အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပါသေးတယ်။ အစ္စရေးလ် မှာတော့ အာမီခိုင်းလ် ဟာ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေကို စာပေသင်ကြားပေးတဲ့ တာဝန်ယူခဲ့ပြီး the Hebrew University မှာ နိုင်ငံခြားကျောင်းသားတွေကို စာပေပို့ချပါတယ်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဗယ်ဆုကို အစ္စရေးလ်ဝန်ကြီးချုပ် ယစ်ဇက်ရာဘင်ရရှိတဲ့အခါမှာ နိုဗယ်ဆုပေးပွဲမှာ ကဗျာရွတ်ဖို့ ရာဘင်က အာမီခိုင်းလ်ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာ စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ရမယ့် God Has Pity on Kindergarten Children ဟာ အဲ့ဒီ့အခမ်းအနားမှာရွတ်ခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေထဲက တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး၊ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံ တဲလ်အဗိ မြို့တော်က ရာဘင်အထိမ်းအမှတ်ပြတိုက်မှာ ဒီကဗျာကို ကျောက်သား ကမ္ဗည်းထိုးထားပါတယ်။ အာမီခိုင်းလ်အမည်နဲ့လမ်းတွေကို အစ္စရေးလ်နိုင်ငံမှာရော မွေးရပ်မြို့ ဝုဇ်ဘာဂ်မှာပါဂုဏ်ပြု မှည့်ခေါ်ထားတာ တွေ့ရမှာပါ။ အာမီခိုင်းလ်ဟာ တစ်သက်တာလုံးကဗျာတွေရေးခဲ့ပြီး ၂၀၀၀ပြည့်နှစ်၊စက်တင်ဘာလ (၂၂)ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။
အာမီခိုင်းလ် ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ဆုတွေကတော့ …
၁၉၅၇ မှာ Shlonsky Prize
၁၉၆၉ မှာ Brenner Prize၊
၁၉၇၆မှာ Bialik Prize for literature (အက်ဆေးဆရာYeshurun Keshet နဲ့ပူးတွဲ) ၊
၁၉၈၁ မှာ Wurzburg’s Prize for Culture (Germany)၊
၁၉၈၂ မှာIsrael Prize for Hebrew poetry.
၁၉၈၆ မှာ Agnon Prize၊
၁၉၉၄မှာ Malraux Prize: International Book Fair (France)၊
၁၉၉၄ မှာပဲLiterary Lion Award (New York)၊
၁၉၉၅ မှာ Macedonia`s Golden Wreath Award: International Poetry Festival နဲ့
၁၉၉၆မှာ Norwegian Bjornson Poetry Award တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စာပေဆိုင်ရာနိုဗယ်ဆုကိုတော့ အကြိမ်ကြိမ်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းခံရသော်လည်း မရရှိခဲ့ပါဘူး။
အလားတူ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စာများ၊ ဆောင်းပါးများ ...:ဘာသာပြန်ကဏ္ဍ